मंसिर १, काठमाडौं । सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्दै लगेसँगै करदाताको संख्या उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा हालसम्म व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ४० लाख नाघेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्म व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४० लाख ४९ हजार १०९ पुगेको छ ।
व्यक्तिगत करदाता २४ लाख ७१ हजार ७२६ र व्यावसायिक करदाता १५ लाख ७७ हजार ३८३ छन् । आव २०७७/७८ मा दुई लाख ४५ हजार ५६१ व्यावसायिक करदाता र पाँच लाख १७ हजार ३८३ व्यक्तिगत करदाता थपिएका छन् ।
कोरोना महामारीको प्रतिकुलताका बाबजुद पनि राजस्व असुलीमा ९५ दशमलव ३२ प्रतिशत प्रगति भएको विभागले जानकारी दिएको छ । आव २०७७/७८ मा रू. ४२९ अर्ब २० करोड राजस्व असुली भएको थियो । यो आव २०७६/७७ को तुलनामा ११ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७७/७८ मा रू. ४५० अर्ब ३४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।
आव २०७७/७८ मा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू. तीन खर्ब दुई अर्ब १६ करोड लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा रू. दुई खर्ब ८७ अर्ब छ करोड असुली भएको छ । यस्तै सोही अवधिमा रू. दुई खर्ब ७७ करोड आयकर र रू. एक खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड अन्तःशुल्क संकलन भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको कुल बेरुजु रू. ४९ अर्ब ६१ करोड ४९ लाख १५ हजार रहेकामा गत आवमा रू. २८ अर्ब ८६ करोड २६ लाख ९६ हजार फछ्र्योट भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
गत आवमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३७ हजार ८६८ करदाता दर्ता भएको र हालसम्म दुई लाख ६८ हजार ४३६ करदाता मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विभागले जानकारी दिएको छ । रासस